Ogaden News Agency (ONA) – Warbixin: Ka Badbaadinta Soomaalida Badbaadiyeyaashooda.
Warbixin: Ka Badbaadinta Soomaalida Badbaadiyeyaashooda.
Badbaadinta Soomaalida Badbaadiyeyaashooda waa warbixin kooban oo ay qortay Laetitia Bader oo ka tirsan hayada xaquuqul insaanka ee Human Rights Watch (HRW).
Warbixinteeda waxay ku xustay in Qaramada Midoobay (QM) soo cusbooneysiinta ogolaanshiyaha ciidamada AMISOM ay kusii joogayaan Soomaaliya oo shalay la cusbooneysiiyay loona baahan yahay inay barbar socoto wax ka qabashada arin culus oo laxidhiidha caddaalad samayn kadib markii in badan ay ciidamada AMISOM ay xadgudubyo ka gaysteen Soomaaliya.
Warbixinteeda waxay Laetitia ku sheegtay in tan iyo 2007 ay Hay’ada Human Rights Watch (HRW) wax ka qoraysay xadgudubyo ay gaysteen AMISOM oo ba’an sida dilal ay u gaysteen dad rayid ah iyo falal galmo laxidhiidha iyo kufsi. Waxay intaa ku dartay inaan baadhitaan larumeysan karo oo hufan aanan wali lasamaynin.
Warbixintu waxay sheegtay in la’aanta rabitaan siyaasadeed ay hor taagan tahay caddaalada. Dalalka ciidamada usoo diray Soomaaliya ma aysan u meel dhigin waqti iyo agab baadhitaano sax ah.
Waxay intaa ku daraysaa in badan ay diideen inay siiyaan xogta saxda ah masuuliyiinta gaar ahaan mar dhawaan ay booqatay caasimada Somaliya ee Muqdisho. Waxay ugu baaqday QM in ay xaqiijiso in dalalka aan u hoggaansamin wax ka qabashada dhibaatooyinka dhacay ay wajahaan cawaaqib xun.
Sidoo kale waxaa warbixintu xustay in loo baahan yahay in ciidamada AMISOM ay wanaajiyaan xidhiidhka ay laleeyihiin shacabka Soomaalida.